चर्चित पत्रकार विनोद त्रिपाठी स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा, बालेनलाई भोट दिने कारण यसरी खुलाए
काठमाडौं । स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा देशका चर्चित पत्रकारदेखि कलाकारसम्मले मुख खोलेका छन् ।
यसैगरि, काठमाडौं महानगरको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई जिताउन रवि लामिछानेदेखि कयौं कलाकारहरुसम्म खुलिसकेका छन् । आजै एकजना चर्चित पत्रकार विनोद त्रिपाठीले पनि बालेन शाहलाई भोट मागेका छन् । उनले सामााजिक संजालका एक सन्देश जारी गर्दै बालेनलाई महानगरबासीले यस कारण भोट दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । हेरौं, उनले जारी गरेको यो अपील ।
आदरणीय काठमाडौंबासी दिदिबहिनी दाजुभाईहरु,
मुलुक निर्माणमा जनताको मुख्य भुमिका हुन्छ । राजधानीबासी जनता देशका अन्य भागका नागरिकका लागि आशाका केन्द्र हुन् । राजधानीमा जे हुन्छ, त्यसको सोझो असर देशभरि पर्छ । देशको काठमाडौं महानगरका बासिन्दाले यसपाली गंभिर भएर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँ रैथाने नेवारहरु छन् । त्यो भन्दा ज्यादा बाहिरबाट आएर बसेका छन् । यी सबैको निर्णयले भोली यो देशको राजधानी निर्माण गर्ने आधार तय गर्छ ।
कुनै पनि देशको राजधानीको मेयर भनेको देशको प्रधानमन्त्री बराबरको हैसियत राख्छ । राजधानी बन्यो भने त्यसको प्रभावले देशका अन्य भाग बन्ने हो । एउटा झुर व्यक्तिको नेतृत्वमा महानगर सुम्पिंदा कुन हविगत भयो अहिलेसम्म सबै छर्लंग छ । यसको असरले देशभर बिकास हुन नसकेको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
हामी सबै दललाई सम्मान गर्छौं । अहिलेसम्म गर्दै आएका पनि छौं । यसपाली भने राजधानीबासीले सबै दलहरुलाई सरी भनौं र एक जना स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवारलाई भोट हालौं । बालेन शाह ।
मतदाताले राजनीति दल नहेरौं । कुन उम्मेदवारले काम गर्न सक्छ त्यो हेरौं । यस पटक काठमाडौं महानगरका बासिन्दाले निर्णय बदल्नैपर्छ । ३० बर्षसम्म यो महानगरलाई दलहरुले नरक जस्तो बनाए । यो त तपाईं हामी सबैले भोगेको देखेको र सुनेको कुरा होनि । यदि भोली बालेन शाहले पनि काम गरेनन् भने अर्को पटक यिनै दलहरुलाई भोट दिउँला । तर, यस पटक सबैले बालेन शाहलाई भोट दिउँ । यो राजधानीबासीको मात्र चाहना होइन, देशबासीकै चाहना हो । हामीले देश बनाउने हो भने, यस पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर हेरौं । काम गर्न नसके अर्को पटक यिनै दललाई विजयी गराउँला ।
अब निर्णय बदलौं । अब निर्णय बदलौं । सबै मिलेर निर्णय बदलौं । परिवर्तन हामीले गर्ने हो । हामी भित्र त्यो संभव छ । निर्णय बदलौं । बदलौं ।
काठमाडौं महानगर भित्रका सबै मतदाताको भोट यसपाली बालेन शाहलाई । धन्यबाद ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पत्र – ‘निवार्चन गीत’ सुन्ने–नसुन्ने अधिकारकाे रक्षा गर्ने केही अप्सन राखौँ !
नेपालका कुनै दलप्रति विश्वास छैन किनकि उनीहरूको सबै परीक्षण असफल भइसकेको छ !
तपाइको भोट नै तपाईको काल हुनसक्छ, आवेगमा निर्णय नगरौं आवेशमा गल्ती नगरौं !
रेणुलाई जिताऔँ भन्दै पाइलट लामाले लेखे – भरतपुरमा बिकाशको परिवर्तनले रेणुप्रति उच्च सम्मान छ !
यो देशलाई दासहरूको होइन सच्चा नागरिकहरूको देश बनाऔं, राष्ट्रघातीहरुलाई छानीछानी परास्त गरौ
नेपालको टाट पल्टाउने रणनीति, दलालहरु चिन्न ढिला गरे पुर्पुरोमा हात !